NamasteNEPALI.com: गैह्र कानूनी रुपमा रक्सी उत्पादन गर्ने सात नेपाली पक्राउ परे कुवेतमा ! 'लाजमर्दो भयो नेपालीलाई !'
गैह्र कानूनी रुपमा रक्सी उत्पादन गर्ने सात नेपाली पक्राउ परे कुवेतमा ! 'लाजमर्दो भयो नेपालीलाई !'
हिजो राती मात्र कुवेतस्थित साल्वा भन्ने ठाउँमा प्रहरीले छापा मारी आजसम्मकै सवैभन्दा ठुलो रक्सीको कारखाना पत्ता लगाएको छ । त्यस प्रकारको प्रहरी कारबाहीमा पक्राउ परेका सातजना नेपाली रहेको बताईन्छ । बदनियतपूर्ण गैर कानूनी काम गर्ने र अपराधिक गतिविधीमा सामेल हुने नेपालीहरुको संख्या बढदै गएको कारण कुवेतमा नेपालीहरु बदनाम हुदै गएका छन् ।
कुवेत बेस भएका कतिपय अनलाइनहरुमा फोटो तथा भिडियोसहित आएका समाचारहरुमा नेपाली महिला र पुरुष दुवै देखिन्छन् । भिडियोमा राष्ट्रियता सोधेको र नेपाली भनेको आवाज प्रष्टै सुनिन्छ ।
उक्त रक्सीको कारखानालाई कुवेतमा हालसम्म पक्राउ गरिएका मध्येकै ठुलो भनिएको छ । जहाँ पन्ध्र सय रक्सीका बोतल विक्रि गर्न तयारी अवस्थामा पक्राउ गरिएको छ । समाचार माध्यमहरुका अनुसार त्यहाँ दुई कन्टेनर रक्सी भएको उल्लेख छ भने दुई सय लिटर जाने ड्रमहरुमा भरिभराउ २५० ड्रम रक्सी बनाउने कच्चा पदार्थ बरामद गरिएको छ ।
कुवेतमा बेला बखत प्रहरीले साना तिना रक्सी उत्पादनका कारखानाहरु पत्ता लगाउदै आएको भए पनि तिनमा नेपालीहरुको खासै संलग्नता देखिने गरेको कमै पाईथ्यो । सानो तिनो परिणाममा रक्सी उत्पादन गर्ने घरेलु प्रविधीका घट्नाहरुमा नेपालीहरुको छिटफुट संलघ्नतालाई व्याक्तिगत प्रयोजनका रुपमा लिने गरिएको भए पनि यसपटक साल्वामा पक्राउ परेको आजसम्मकै सवैभन्दा ठुलो रक्सी उत्पादन कारखानामा नेपालीहरुको संलघ्नताले नेपालीहरु बदनाम भएका छन् ।
यसरी नै कुवेतमा नेपालीहरुबीच आपसी झगडाका घटनाहरुमा पनि निक्कै बृद्धी भएको छ, सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा धारिला घरेलु हतियार लिएर नेपालीहरु आफै आफै मारामार गर्ने तहमा उत्रिन थालेपछि नेपालीहरुलाई सार्वजनिक गतिविधी नगर्न कुवेत सराकारले रोक नै लगाएको छ । यसैबीच दुइसाता पहिले अवैध रुपमाा गर्भपतन गर्ने एक महिला अधिक रक्तश्रापका कारण मरेको भन्ने समाचारले निक्कै सनसनी फैलिएको थियो । नेपालीहरुले बच्चा जन्माउने फाल्ने वा बेबारिसे छाड्ने घट्नाहरु घटाउदै आएका छन् ।
सामाजिक संजालमा यस्ता घट्नाहरु भाईरल बन्ने र कमेन्टमा नेपालीहरुले नेपालीहरुलाई नै गाली गलौज गर्ने गरेको पाईन्छ । आजै मात्र पत्रकार सुजन केसीले कुवेतकै सवैभन्दा ठुलो रक्सी कारखाना पक्राउ परेको भिडियो फेसबुकमा शेयर गर्दै लेखेका छन् : अव त यहाँ नेपाली भन्न पनि लाज लाग्ने भो ।
कुवेतमा नेपालीहरुले बदनामी कमाउदै समाचारका हेडलाईन बन्न थालेसँगै नेपाली समाजका भद्रजनहरु चिन्तित बनेका छन् । तर यहाँ रहेको ५ दर्जन सँघ सँस्थाहरुले ईज्जत बचाउने, चेतना अभिबृद्धि गर्ने कुरामा कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । भरखर मात्र एनआरएन को अगुवाईमा आपसी झै झगडालाई अन्त्य गर्न पहल थालेको छ तर दुतावासले कस्तो सहयोग गर्दछ उसको कदम त्यसमा निर्भर रहने बताईन्छ ।
नेपालीहरु बेश्याबृर्ति चोरी, झै-झगडा देखी रक्सि खाने बेच्ने बनाउने सबै ठाउमा पक्राउ पर्ने गरेका छन । एक नेपालीले तलब दिन राखेको पैसा चोरी गरि भागेको समाचार पनि सामाजिक संजालमा भाईरल बनेको छ । गत १५ दिनमा कुवेतका पत्रपत्रीकामा प्रकासित भएका समाचारले सबै नेपालीहरुलाई लज्जित बनाएको छ । कुवेतमा रक्सि बनाउन बेच्न तथा खान अपराध मानीन्छ ।
- नेपाल कुवेत डट कम